Warar - Noocyada shan xarumood oo mashiinka dhidibka ah
Inta badan shanta xarumood ee mashiinka wax lagu farsameeyo ayaa qaata qaab dhismeedka 3 + 2, taas oo ah, XYZ seddex faasas oo toosan oo lagu daray labo ABC ah oo seddex faasas ah oo wareegaya wareega XYZ siday u kala horreeyaan. Marka laga eego dhinaca ballaaran, waxaa jira kyzab, xyzac iyo xyzbc. Marka loo eego qaabka isku-darka labada faasas ee wareega, waxaa loo qaybin karaa saddex nooc oo shan xarumood oo xarig oo isku xidha: laba jibbaar miiska miiska, ujawaab nooca madaxa lulaya, iyo nooca madaxa lulaya. 1: Shan xariiq oo mashiinka dhudhunka ah oo leh qaab-dhismeed laba jibbaaran:
A-dhidibka + c-dhidibka qaab-dhismeedka laba-jabaaba, worktable ayaa lulid ku wareegsan dhidibka-x, taas oo ah-dhidibka. Bartamaha miiska wuxuu ku wareegi karaa 360 digrii oo ku wareegsan dhidibka Z, oo ah dhidibka c. Marka la isku daro AC laba faasas, marka laga reebo dusha hoose ee workpiece-ka lama shaqeyn karo, shanta dusha kale waa la shaqeyn karaa. Faa'iidooyinka mashiinkan ayaa ah in qaabdhismeedka dunmiiqa uu fudud yahay oo adag yahay, kharashkiisuna hooseeyo, laakiin awoodda qaadista ee worktable-ka ayaa xaddidan
Noocaan shanta xarig ee mashiinka isku xidhka ah wuxuu ka kooban yahay xizbc dhidibka. Spinding-ka shanta xarig ee mashiinka wax isku xidhka ayaa si gaar ah u jajaban, aagga shaqeyn karaana waa mid aan xad lahayn, laakiin qaabdhismeedka dunmiiqa ayaa ah mid adag oo kharashkuna uu badan yahay.
3: Shan xarig oo xarig xarig ah oo labalaab ah oo leh qaab dhismeedka madaxa oo labalaabmaya:
Saxnaanta wareegga sare ee dunmiiqa waxaa lagu xalliyaa iyadoo la adeegsanayo mashiinka mashiinka wadnaha ee xoogga badan. Qaab dhismeedka mashiinka oo dhan inta badan waa nooca albaabka.